China Aspirator AVERLAST 25 orinasa sy mpanamboatra | AngelBiss
Masinina suction Portable AngelBiss miaraka amin'ny rafitra tavoahangy Direct Plug-in tavoahangy sy rafitra fiarovana avo roa heny.
Ny haben'ny tavoahangy lehibe dia hisoroka ny famerenanao ny paompy. Ary ny tavoahangy dia tantera-drano sy azo ampiasaina indray. Hitahiry loharano izany.
Ny Masinina Suction Portable dia manana fidirana tokana ihany. Mora ny mampandeha azy. Ny tavoahangy suction sy ny vatan'ny masinina dia mifanentana tanteraka.
Manana hanger fantsona malefaka ihany koa izy io. Mety kokoa ny manadio rehefa vita ny fampiasana azy.
Natao manokana ho an'ny rindranasa misy toetran'ny tsindry raikitra sy ny tsindry, ny milina fitrohana azo entina dia manolotra fomba haingana sy mahomby hanadiovana ny rà, ny rano, ny pus ary ny ranoka viscous hafa aorian'ny fandidiana.
Raha vantany vao azonao ny milina fitrohana azo entina, dia hanome serivisy haingana sy mahomby amin'ny efitrano fitsaboana sy efitrano fandidiana.
Famolavolana MachineBox Portable Suction an'ny AngelBiss avy amin'ny fikorianan'ny rivotra 18L sy 25L, miaraka amin'ny fifehezana banga 0.07Mpa ~ 0.08Mpa. Ary misy ihany koa io
amin'ny 110V na 220V.
Azafady mba manaova safidy mety amin'ny fangatahanao manokana.
Raha mila fanontaniana na fanontaniana bebe kokoa momba ny masinina AngbelBiss Portable Suction, azafady mifandraisa aminay info@angelbisscare.com ary hisy solontena hanaraka anao haingana araka izay tratra.
1. Suction mahery hatramin'ny 0,08 Mpa
2. Rafitra fiarovana avo roa heny amin'ny fiarovana
3. Rafitra tavoahangy plug-in mivantana, tsindry iray fotsiny hamoaka tavoahangy
4. tavoahangy fisotroana kapasitas 1400 ml
5. Teknolojia sivana vaovao izay manakana ny fidiran'ny zavamiaina bitika sy ny 6. 6. miafina ao amin'ilay fitaovana
7. Iray ihany ny fidirana amin'ny hosotra hosoka, sorohy ny fidirana amin'ny rivotra sy ny fivoahan'ny rivotra
8. Fandehanan-draharaha madio madio sy tsy manara-penitra ary mpampiasa
Safidy fikorianan'ny rivotra 20L & 25L
ANGELBISS dia manome milina fitrohana 25L azo averina azo fidina ihany koa
1. DC12V azo haverina
2. Famerenana haingana ao anatin'ny 90 minitra, fihazakazahana mitohy 180 minitra (adiny 3)
3. bateria Lithium ambony
Rafitra mitondra fiara paompy
Max. Fidiran'ny rivotra
Max. Fanerena poakaty
Max. Fahaizana jar
Fiarovana amin'ny tondra-drano
Fiarovana fiarovana avo roa heny
Azo tanterahina indray ny rano
Iray ihany, ary tsy mila outlet
0.00Mpa ～ 0,1Mpa
Faritra fanaraha-maso vacuum
Sitroka fantsona mihantona
Ny iray, eo ankavia
Wall Tip Hang
Roa, ao aoriana
Tanana azo ahodina azo nafenina
Eny, eo an-tampony
Rafitra fiarovana 3
Fiakarana ambaratonga voalohany
Ny ambaratonga faharoa dia mijanona mihoatra ny onja
Bateria Lithium (Raha vaovao)
1 napetraka, DC 12V
Fotoana feno tokony ho 1,5 ora
Manohana fotoana fampiasana 3 ora
Adapter fiara mpamonjy voina
Tapaka ny herinaratra mandeha ho azy
Isaky ny 30 minitra
Isaky ny 2 ora
Ampidiro ny haben'ny boaty
415x360x300mm ho an'ny singa 2
415x360x300 mm ho an'ny singa 2
Ny lanja mavesatra isaky ny singa
Manafatra lanja mavesatra isaky ny boaty
41 ℉ ka hatramin'ny 104 ℉ (5 hatramin'ny 40 ℃)
10% hatramin'ny 90% RH
Fanerena atmosfera miasa
-4 ℉ hatramin'ny 131 ℉ (-20 ℃ hatramin'ny 55 ℃)
10 hatramin'ny 95% RH
Previous: Masinin-tsofina Portable Dentistry
Manaraka: AUTO CPAP / BIPAP
Masinina mitsentsitra mpandidy biraon'ny herinaratra
Aspirator suction azo entina
Aspirator ny ratra